यी कारणले शरीरमा ‘भिटामिन ए’ छ आवश्यक, बेलैमा होस् पुर्‍याउनुहोस् « Lokpath
काठमाडौं । शरीरलाई राम्रोसँग काम गर्न दिनहुँ विभिन्न प्रकारका पोषक तत्वहरू चाहिन्छ। सामान्यतया, प्रोटिन, भिटामिन सी-डीजस्ता पोषक तत्वहरूको आवश्यकतालाई बुझेर हामीले आहारको माध्यमबाट उपभोग गर्छौं तर अन्य धेरै आवश्यक पोषक तत्वहरूको उपभोग गर्न बिर्सन्छौँ।
भिटामिन-ए यस्तो आवश्यक पोषक तत्व हो, जसको कमीले शरीरमा धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छ। भिटामिन ए आँखा, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रजनन र छाला स्वास्थ्यसहित अन्य धेरै शारीरिक कार्यहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। विज्ञहरूले दैनिक आधारमा यो पोषक तत्वयुक्त आहार उपभोग गर्न सल्लाह दिन्छन्।
भिटामिनको लागि वयस्क पुरुषलाई दैनिक ९०० माइक्रोग्राम र वयस्क महिलालाई ७०० माइक्रोग्राम दैनिक आवश्यक पर्छ। भिटामिनको कमीका घटनाहरू प्रायः गर्भवती महिलाहरू, स्तनपान गराउने आमाहरू, शिशुहरू र बालबालिकाहरूमा देखिन्छन्।
यसको कमी भएका मानिसहरूलाई सिस्टिक फाइब्रोसिस र क्रोनिक डायरियाजस्ता समस्याहरू हुन सक्छन्। विकासशील देशहरूमा धेरै मानिसहरूले पर्याप्त भिटामिन ए नपाउने तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ ।
भिटामिन ‘ए’को कमी को लक्षण के–के हो त ?
छालासँग सम्बन्धित समस्याहरू :
भिटामिन-ए छालाको कोशिकाहरूको निर्माण र तिनीहरूलाई स्वस्थ राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसले छालामा हुने सूजनलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ।
अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि पर्याप्त भिटामिन ए नपाएका मानिसहरूमा एक्जिमा, छाला सुख्खा हुने, चिलाउने र सुन्निने समस्या हुन सक्छ। ध्यान राख्नुहोस् कि भिटामिन ए को कमीले छालाको कोसिकाहरूलाई पनि दीर्घकालीन क्षति पुर्याउन सक्छ।
आँखा सुख्खा हुने समस्या :
भिटामिन ए को कमीले आँखा सुख्खा हुने समस्यालाई पनि बढाउँछ । यसमा कमी भएका व्यक्तिहरूलाई कमजोर दृष्टि वा अन्य कोर्नियल समस्याहरूको उच्च जोखिम हुन सक्छ।
आँखा सुख्खा हुने समस्यामा आँखामा आँसु कम हुने भएकाले रातो हुने, पोल्ने र डङ्गिने समस्या हुन सक्छ । भारत, नेपाल, अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका साना बालबालिका, जसमा आफ्नो आहारमा भिटामिन एको कमी हुन्छ, आँखा सुख्खा हुने खतरा बढी हुन्छ।
रोकिएको वृद्धि :
पर्याप्त मात्रामा भिटामिन ए नपाउने बालबालिकाको वृद्धि ठप्प हुन सक्छ। भिटामिन ए मानव शरीरको उचित विकासको लागि आवश्यक छ। धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि भिटामिन-ए पूरकहरू कोशिकाहरूलाई स्वस्थ राख्न र बच्चाहरूको वृद्धि बढाउनका लागि लाभदायक हुन सक्छ, यद्यपि, तिनीहरू डाक्टरको सल्लाहमा मात्र लिनुपर्छ।
भिटामिन ए कसरी प्राप्त गर्ने ?
यो अत्यावश्यक भिटामिन दैनिक आहारमार्फत सेवन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ। तपाईले आफ्नो आहारमा बीटा क्यारोटिन युक्त चिजहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिटामिनको राम्रो मात्रा हरियो (पातदार) तरकारीहरूः जस्तै पालक, गाजर, मीठो आलु, पहेंलो फलहरू जस्तै आँप, मेवा र खुबानीमा पाइन्छ। यो भिटामिन टमाटर, अण्डा र दूधबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०७९,बैशाख,१९,सोमवार १२:५०